Dhaco walax tirtiray taleefanada aad noqon kartaa waqti daalo qof kasta. Si kastaba ha ahaatee, wax badan oo ah alaabtii oo la badbaadiyey in aad dib waqti ka waqti iyo inay jiraan fursado ay dib u helaan xogta lumay. Waxaa waxtar u leh kiisaska dadka laga badiyo xogta ay sabab u tahay guul daraysto nidaamka. Waa maxay gurmad ah kasoo muuqday run ahaanti waa si loo badbaadiyo macluumaadka la heli karo ee guddiga xusuusta reer blackberry sida aad xiriirada iyo entries jadwalka laakiin waxa aanu dib u badbaadin ilaa wax kaarka warbaahinta.
Wixii nidaamyo dhowr ah, waxaa jira siyaabo kala duwan oo ka mid ah Reload xogta lumay ama la mid ah ka muujinta raad raac ah oo aad blackberry soo saaro. Software kala duwan waxaa lagu heli karaa in ay yihiin extractors gurmad u Blackberry iyo qaar ka mid ah caawinta aad ee diinta xogta la socdaan saarista. Ku dhawaad ​​dhammaan codsiyada shawladda kaabta Blackberry si fudud Macdan kartaa fariimaha qoraalka ah, fariimaha, xiriirada iyo xitaa entries taariikheed ee aad samayn oo ay la socdaan hawlaha iyo cadaymaha laga gurmad ah.
Bal aan fiirino ee ugu sareeya 3 Extractors kaabta Blackberry laga heli karo suuqa.
Reincubate Blackberry kaabta shawladda
Top Tani qiimeeyo software soo saarida gurmad Blackberry Reload karo iyo sidoo kale si fudud loogu badalo xogta aad ka dib markii ay soo saarida ka gurmad ah. Sidoo kale waa wejiyo ku saabsan siyaabaha soo saarista iyo ayaa loogu talagalay in lagu soo saaro xogta lagu kaydiyaa .BBB iyo .IPD oo ay ku jiraan qaybaha cusub ayaa sidoo kale u eg v2 .BBB files format. Waa mid aad u fudud in la soo nooleeyo oo dhan xogta aad laga badiyay iyo dib xogta aad la helo geeddi-socod click hal iyo wax kale oo dhan. Tani waxay sidoo kale ka shaqayn kartaa buugaag xiriirkaaga, farriimo nooc kasta, entries in jadwalka Guda telefoonka, iyo xataa videos iyo sanamyadii.
Waa fudud ah oo si sahlan loo isticmaali software habka a click hal Macdan files gurmad iyo macluumaad kale oo ka shawladda Blackberry.
The kaabta shawladda Reincubate Blackberry ma taageeri version BB10 iyo aad u baahan tahay si aad u hubiso la hor socda, waayo, software this.
MyPhoneData Blackberry shawladda kaabta u Mac
Tani waa software gaar ah, mid ka mid ah Blackberry shawladda software kaliya ee midayn buuxda u shaqeeya Mac oo kaa caawinaysaa in aad soo kabsado xogta aad, iyo gurmad blackberry files si toos ah badbaadiyey in aad Mac. Waxaad Reload kartaa wax kasta oo file in loo abuuray la Manager Desktop Blackberry taas oo la socon kara software ah.
MyPhoneData Blackberry shawladda kaabta u Mac kaa caawinaysaa in aad soo saaro fariimaha qoraalka ah, xiriirada iyo wax badan oo kale sida emails, iyo hawlo ka mid ah files xog gurmad. Ugu weyn ee kor u - dhibcood ee software waa in aad u isticmaali kartaa ugu dambeeyay qaabab gurmad Blackberry sida .BBB iyo .IPD. Si aad u isticmaasho software ah inaad sameyso (dib markii la rakibey) oo dhan waa in ay doortaan faylasha aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado ka dibna riix 'Ladnaansho' badhanka si ay u bilaabaan soo saarista.
Waxaad ka heli kartaa tijaabo ah oo lacag la'aan ah, oo aad dib u soo ceshano karo iyo Macdan file hal nooc file kasta. Waxaad samayn kartaa go'aan ku saleysan maxkamadda.
Waxaa mararka qaarkood ma aha la jaan qaada ah aaladaha yar oo laga yaabaa in aad hubiso intaadan gadan; doorasho tijaabo waa weyn ka badbaadiyay halkan.
Magic Berry by Mena Tallaabada xalal hal-abuur waa software weyn soo saaro xogta iyo la socoto in ay sidoo kale kaa caawinaysaa in aad si loogu badalo faylasha jiifka iyo BBB Blackberry iyo files database galay qaabab kala duwan sida looga baahan yahay. Habka fiirsato waa mid aad u fudud oo aad dhammaan noocyada kala duwan ee fariimaha iyo taariikhda wac xitaa telefoonka iyo Guda ka heli kartaa oo ay la socdaan qaab beddelidda, buugaagta adeegga qaabab kala duwan oo ay ka mid yihiin CSV iyo files qoraalka. Waxa kale oo aad edit karaa diiwaanka. Waxay si buuxda u user waa saaxiibtinimo si ay u isticmaalaan oo aan wax dhibaato ah. All aad ayaa looga baahan yahay in la sameeyo waa ay doortaan files ee soo saarista.
User - saaxiibtinimo iyo fududahay in la isticmaalo software kula Ma jiro wax khaladaad in la rakibo. Waxaad ku rakibi kartaa oo bilaabi sanaanayaa xogta aan wax dhibaato ah.
On qalabka dhowr iyo versions, faylasha .BBB aan la raadsan karaa oo kaliya .IPD qaab faylasha lagu reloaded karo.
Waraaqda kaabta Blackberry in devices- kale Wondershare MobileTrans
Kuwani waa 3 Blackberry software shawladda kaabta sare ee suuqa. Way fududahay in la soo saaro xogta ka hayaan Blackberry. Laakiin haddii aad ka fekereyso inaad soosaaray xogta ka hayaan .bbb iyo wareejiyo qalabka kale, sida cusub Android, iPhone iwm, Wondershare MobileTrans xaqiiqdii waa doorashada ugu fiican ee aad. Alaabta Tani waxay taageeri karaan inay soo saaro hayaan bbb, Lugood / hayaan iCloud, Samsung Kies hayaan, iwm iyo wareejiyo content in ay deivces kale.
Transfer xiriirada ganacsiga iyo xiriir shakhsi ee laga BlackBerry in Android oo iPhone si fudud.
Xalka kaliya ee SMS ka BlackBerry wareejiyo iPhone oo adduunka ah.
Si buuxda u la jaan qaada telefoonka BlackBerry socda OS 7.1 iyo bilowgii iyo BlackBerry® Desktop Software 7.0 iyo 7.1.
Si fiican u shaqeeyaan in ka badan 3000 telefoonada iyo shabakadaha kala duwan.
> Resource > Top List > Top 3 Simple Extractors kaabta Blackberry